Sugitaanka Natiijada Iyo Jawiga Somaliland 24 Saacadood Ka Dib Doorashada | Somaliland.Org
Sugitaanka Natiijada Iyo Jawiga Somaliland 24 Saacadood Ka Dib Doorashada
June 27, 2010	Guud ahaan xaaladda dalka Somaliland ayaa deggan maalin kadib markii dadku u dareereen inay u codeeyaan musharixiinta saddexda xisbi waxana ay u egtahay in ka midho dhalinta doorashada si weyn loogu guulaystay taas oo amaanta kowaad ay leeyihiin dadweynaha reer Somaliland. Dhinaca kale waxa guud ahaan la ammaanay hawsha Guddida Doorashooyinka qaranka oo iyagu u xilsaarnaa ka midho dhalinta doorasho xor ah oo xalaal ah oo dalka ka dhacda. Tirintii Codadka ayaa weli socota inkasta oo ay ku dhowdahay gebogebo waxana la filayaa tirrada rasmiga ah ay Komishanka Doorashooyinka Qaranku (KDQ) ku dhawaaqi doonaan muddo 7 maalmood gudahood taas oo noqon karta wakhti ka yar 7-da.
Hase ahaatee goobaha ilaa hadda la tiriyay dalka oo dhan ayaa laga arki karaa in saddexda xisbi ku kala baxeen oo aan wax muran ahi oo weyni ka jirin sida axsaabtu ugu kala horrayso codadka ay ka kala heleen taageereyaashooda. Illo xog ogaal ah oo Somaliland.Org u warramay ayaa sheegaya in qaabka ay imika u taallo natiijadu marka loo eego % boqolkiiba sida loogu kala horeeyo codadka (percentage) aanay wax badani iska beddelin iyada oo tirintu soo gebogeboobi doonto saacado gudahood, meelo badan oo iyaga tirintu ka soo dhamaatayna la ogyahay lana odhan karo waa tirradii rasmiga ahayd.
Haddaba shebekadda wararka Somaliland.Org oo ixtiraamaysa codsiga Guddida Doorashooyinka waxaanu go’aansanay in aan ka warsugno inta ay KDQ ku dhawaaqayso tiro hordhac ah ama ta rasmiga ah ee dalka oo dhan.
Dhinaca kale wasiirada xukuumadda iyo dad u shaqaynayay oo sida la ogyahay maalintii Sabtida 26 Juun iyo intii ka horraysaba dhaqdhaqaaqoodu badnaa mar ay noqoto iibsiga kaadhadhka iyo isku day inay carqadeeyaan goobaha ay filayaan in lagaga cod badan doono, ayaa la filayay inay sii wadi doonaan carqaladaynta tirinta codadka iskuna dayi doonaan inay faragelin ku sameeyaan dhamaan goobaha ay tirintu ka socoto ilaa inta laga gaadhayo natiijo ay iyagu raalli ka noqon karaan. Inkasta oo la soo sheegayay goobo laga aloosay rabshado, haddana waxa maanta la arki karaa in wasiirada xukuumadda iyo dadkii xukuumaddu soo diranaysay ay ku yaraanayaan goobaha tirintu ka socoto. Lama hubo inay wasiiradaasi ku qanceen ama ka jiyad jabsanyihiin wixii uga soo baxay tirinta codadka iyo in awooddoodu soo koobantay. Halka dad kale oo indha indhaynanay hawsha doorashada ay sheegayaan in yaraanta carqaladaynta dhinaca xukuumadda aanay ka iman wasiirada xukuumadda oo u hoggaansamay sharciga ee ay ka timid dadweynaha oo aad uga hortagay una horjoogsaday faragelintaas ka imanaysa wasiirada iyo dadka u shaqaynaya xukuumadda.
Guud ahaan waxa la rumaysan yahay in saddexda xisbi ay kala haystaan sawirka guud ee tirrada uga soo bixi doonta doorashada iyaga oo ka saadaal qaadanaya tirooyinka ilaa hadda la tiriyay iyo codadka hadhsan ee aan la tirin oo gabaabsi ah. Halka kuwa tiradoodu hoosayso ay sugayaan in mucjiso kale timaaddo guushana dhinacooda u riixdo.
KDQ ayaa la filayaa in loo soo gudbin doono tirooyinka rasmiga ah ee ka kala codaysay 21-ka degmo ee dalka ee doorashooyinku ka dhaceen. Tiradaas oo KDQ marka ay qiimayso kuna qanacdo, kadibna la xalliyo wixii lagu muransanyahay, waxay KDQ ku salayn doontaa natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday codaynta laguna ogaandoono musharaxiinta noqondoona Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Somaliland 5 sannadood ee soo socda.
Previous PostLike Orwell’s animal farm government, Riyaale’s government ended in disarray!Next PostGuddida Doorashadu maxay ka yidhaahdeen Doorashada Madaxtooyada?	Blog